Kulamo looga tashanayo dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo SH/dhexe oo ka socda magaalada Jawhar. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Kulamo looga tashanayo dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo SH/dhexe oo ka socda...
Kulamo looga tashanayo dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo SH/dhexe oo ka socda magaalada Jawhar.
Kulammo Gooni-gooni ah looga tashanayo dhismaha maamulka gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa ka socda degmada Jowhar oo lagu ballan-san yahay inuu dib uga furmo shirka dhimasha maamulka Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan.
Wararka ayaa intaas ku daraya in shirarkan gooni-goonida ah ay leeyihiin Waxgaradka iyo siyaasiyiin ku sugan Jowhar, iyadoo warbaahinta aan loo ogoleyn inay kulammadaas goob-joog ka ahaadaan, waxaase la sheegayaa inay jiraan kala aragti duwanaasho shirka Jowhar ku saabsan.
Kulamadan gaar-gaarka ah ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhawaan ay waxgaradka Gobolka Hiiraan ay sheegeen inay Qaadaceen gabi ahaan ka Qayb-galka Shirka Magaalada Jowhar, kaddib markii ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyeen inay waddo aan sax ahayn u soo martay dhismaha shirkaan.
Dhanka kale, waxaa jira siyaasiyiin iyo xildhibaanno iyaguna aamisan in shirkan sida uu ku socdo uu yahay si aan sax ahayn, iyagoo ku baaqay in shirkan uu noqdo mid loo madax-banneeyo dhiancyada maamulka sameysanaya.
Ugu dambeyntii, Muranno ku saabsan Shirka ka socda Jowhar ayaa Dhawaanahan si ad ah sare ugu kacayay, iyadoo madaxweynaha Somalia uu dhowr jeer u tagay Baladweyne, sidii xal looga gaari lahaa khilaafaadyada shirka Jowhar.
Previous articleXaafado ka tirsan degmada Kismaayo oo madaafiic lagu garaacey ay dhaawacyo kasoo gaareen dad rayid ah.
Next articleHawl galkii degmada Awdheegle oo la sheegey in ay ka qeyb qaateen ciidamada comandawska Soomaaliya.